Azo alaina amin'ny antso an-tsary rehetra amin'ny WhatsApp | Vaovao momba ny gadget
Roa herinandro lasa izay dia nanana fotoana hitsapana ireo antso an-tsary tamin'ny WhatsApp izahay noho ny fampiharana an'io fampiasa io ao amin'ny programa beta manana an'ity serivisy fandefasan-kafatra ity ao amin'ny Google Play. Ny antso an-tsary sasany izay miampy ireo antso an-tariby izay efa nataontsika nandritra ny fotoana elaela, ho an'ny rindranasa izay am-piandohana dia antso ho an'ny hafatra an-tsoratra fotsiny.
Androany ny serivisy fananan'ny Facebook dia nanambara fa efa misy ny antso an-tsary azo ampiasain'ny mpampiasa rehetra amin'ny iOS, Android ary Windows Phone. Zava-baovao iray manampy ny maro hafa izay nitranga tato ho ato, toy ny safidy hitendry feo am-peo any ambadika na ny fiasa misy azy izay tiana hanahaka serivisy hafa.
Raha hampiasa ilay fiantsoana horonan-tsary vaovao dia tsotra tsindrio ny bokotra antso izay hita eo amin'ny ilany ankavanana ambony amin'ny efijery izay ifampiresahanao amin'ny namanao na olona iray ao amin'ny fianakavianao. Misy varavarankely pop-up kely manontany raha te-hiantso feo na horonan-tsary ianao.
Mandritra io antso io dia afaka miova ianao eo anelanelan'ny fakan-tsary aloha na aoriana, ampangino izy na tsindrio ny bokotra mena manantona azy fotsiny. Ny zavatra mahatsikaiky dia misy tsy fitoviana kely eo amin'ny interface interface an'ny iOS sy Android, toy ny toerana sy ny filaharan'ny singa efijery toy ny bokotra na ny feed video mihitsy.
WhatsApp dia efa manolotra karazana endrika mahafinaritra, saingy ny fiantsoana horonantsary iray amin'ireo nangatahina indrindra arakaraka ny tenany. Ity fahaiza-manao vaovao ity dia hametraka azy amin'ny ady hevitra amin'ny seza fiandrianana amina fampiharana mahaliana marobe toa ny Skype, FaceTime, Viber, Line ary maro hafa.
Noho izany, raha tena mpankafy WhatsApp ianao dia afaka manao izao manavao sy manomboka antso mahita ny namanao na ny fianakavianao tahaka ny fahitany anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Azo alefa amin'ny rehetra izao ny antso an-tsary amin'ny WhatsApp
Ny Huawei Mate 9 Pro misy écran curved dia efa ofisialy